HomeWararka CiyaarahaKooxaha ugu Weyn Horyaalka Spain, Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid oo bar-baro lagu qabtay Dhamaantood
May 16, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Kooxaha waaweyn ee horyaalka Spain ee Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa dhamaantood barbarro galay kulamadoodii caawa oo laba ka mid ah ay marti ahaayeen, midna garoonkeeda lagaga daba yimid.
Kooxda horyaalka ku guuleystay ee Real Madrid oo marti u ahayd Cadiz ayaa xajisan kari weyday gool ay waqti hore la timid oo uu u saxeexay Mariano Diaz, xilli uu goolka hortiisa kubadda ugu dhiibay Rodrygo Goes oo kasoo shaqaystay garabka midig.
Goolkan oo yimid daqiiqaddii 5aad ee bilowga ciyaarta ayay Real Madrid filaysay inuu fure ugu noqon doono guul weyn oo ay gaadho, hase yeeshee waxa laga daba yimid isla qaybta hore.
Cadiz oo khadka cas ku jirta ayaa uu Ruben Sobrino u dhaliyey gool qurux badan ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada, hase yeeshee waxay iska khasaariyeen rikoodhe ay qaybtii labaad heleen, taas oo uu goolhaye Andriy Lunin ka qabtay Alvaro Negredo, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 1-1.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa barbarro goolal la’aan ah kula dhamaysatay Getafe oo ay ku booqatay Coliseum Alfonso Perez.
Barcelona oo inta badan ciyaarta maamulaysay ayaa uu nasiibku ka hor istaagay inay shabaqa soo taabtaan, inkasta oo ay marar badan isku dayeen, waxaana Aubameyang iyo Ferran Torres oo kusoo wada bilowday ay garoonka ka baxeen iyagoo liicin kari waayey difaacyahannada Getafe.
Memphis Depay ayay ahayd inuu ugu yaraan hal gool dhaliyo, sidoo kalena Aubameyang uu sii wato rikoodhkiisa gool-dhalinta, hase yeeshee waxa heegan ugu jiray oo isku-daygooda u babbac-dhigay difaacyahannada iyo sidoo kale goolhaye David Soria oo shaqo fiican qabtay.
Ansu Fati iyo Luuk de Jong ayaa uu Xavi Hernandez waqti dambe keenay, si ay madax ugaga faa’iideeyaan kubbadaha dhinacyada laga keenayo, waxayse kooxdu tebaysay Ousmane Dembele oo kursiga ku dhamaystay iyadoo xilli ciyaareedka iyo qandaraaskiisuba sii dhamaanayaan.
Inkasta oo ay barbarro goolal la’aan ah gashay, haddana Barcelona ayaanay cidina usoo dhoweyn oo xaqiiqsatay inay kaalinta labaad ee horyaalka LaLiga ku dhamaysanayso, waxaana fursaddaas siisay Atletico Madrid oo xajisan weyday guul ay qarka u saarnayd, xilli ay garoonkeeda Wanda Metropolitano kusoo dhoweysay Sevilla.
Tababare Diego Simeone ayay kooxdiisu gool kala hormartay Sevilla, waxaana u saxeexay difaaca dhexe ee Jose Gimenez oo goolka ku qabtay kubbad uu ka helay Carrasco, waxaanu goolkaasi ahaa midka kaliya ee ciyaarta laga dhaliyey illaa laga soo gaadhayay daqiiqaddii 85aad, markaas oo Sevilla ay keensatay goolka barbarraha.
Kubbad uu kasoo shaqeeyey Oliver Torres ayaa waxa goolhaye Jan Oblak weydaariyey Youssef En-Nesyri, sidaas ayaanay ciyaartu ugu soo dhamaatay 1-1.